DOODII GOLAHA GUURTIDA IYO HADALKII XAAJI ABDI WARAABE | Toggaherer's Weblog
Fadhiga maanta ee Golaha guurtida Somaliland oo ay ka qaybgaleen 66 mudane, isla markaan uu gudoominayey gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan, isla markaana ay ka muuqatay dareen kacsan iyo kala qaybsanaan xildhibaanada dhexdooda ah, ayaa waxa hadheeyey khilaafkii mudanayaasha dhexyaalay, kadib markii fadhiga ay ka qaybgaleen xildhibaanadii mooshinka fashilmay watay ee laga reeyey.
Markii fadhigu furmay ayaa markiiba Guddoomiyuhu hadalkii furitanka siiyey Xaaji. Cadbdikariin Xuseen (Cabdi-waraabe) oo ka mid ah guddi iskood isugu xilsaaray furdaaminta khilaafka beryahan dambe hadheeyey Aqalka Odayaasha, soona jeediyey in goluhu isugu yimaad fadhi gaar ah oo kaga wadahadlaan wixii tabashooyin ah. Golaha dhexdiisa khilaaf, cilad, cay iyo dhibaato midna kama jiro ee golaha didmo ayaa ku dhacday. Madaxu haddii uu ku cannuuno lama qaadi karo, gacantu haddii ay ku xannuunto waa la qaadaa, lugtu haddii ay ku xannuunto waa laga dhutiyaa, caloosha waa la qabtaa, golaha waxa cadhooday Guddoomiyaha, markaa Guddoomiyuhu golaha ha dejiyo, goluhuna ha qaato talada oo ha iscafiyo, fadhi dambena ha yeesho, maantana Guddoomiyuhu ha hadlo oo ha dejiyo golaha.” Sidaa waxa yidhi Xaaji Cabdi-waraabe.Haseyeeshee, soo jeedinta Xaajiga oo golaha dhexdiisa ka abuurtay waxoogaa guux ah, ayaa Guddoomiiyaha Guurtida Md. Saleebaan Maxamuud Aadan, waxa uu xildhibaannada si kedis ah ugu wargeliyey in ay u codeeyaan talada Xaaji Cabdi-waraabe, taas oo ay oggolaadeen 57 mudane, 6 ka mid ahina diideen, laba kalena way ka aamuseen, Guddoomiyuhuna ma codayn.
Natiijada codqaadista kadibna waxa Guddoomiyuhu ku wargeliyey mudanayaasha in gelinka dambe ee Axadda Maanta isugu yimaadaan xarunta Golaha Guurtida fadhi albaabadu u xidhan yihiin oo lagu gorfeeyo xallinta khilaafaadka xiisadda weyn ka dhex abuuray xildhibaannada Aqalka Odayaasha.
Goluhu wuu mahadsan yahay horta, aad buu saaka u qurux badan yahay oo 66 mudane ayaa jooga, waa Ilaahay mahadii, waxaan ku rajoweynahay oo aan u arkaa in tirada intaa le’egi awalba isugu maynaan imanayne inay danaynayso danaha dalka oo ay rabaan in xal loo helo. Waxaan ku darayaa shirar inoo gaar ah oo xidhan in aynu yeelano, meel ina qaadaa ma jirto oo aan golaheenan ahayni. Waxaan leeyahay maantana ha la nasto berri gelinka dambena aynu halkan fadhi isugu nimaadno, maantana wanaagaa aynu isku wada muujinay ha inoogu dhammaato,” ayuu yidhi Md. Saleebaan-gaal.
Dhinaca kale, koox mudanayaal ah oo fadhiga golaha ka dhex sheegay inay yihiin guddi isu xilsaartay xallinta khilaafka golaha dhexdiisa, ayaa Shirguddoonka ka dalbay in loo oggolaado hawshaas oo lagu siiyo kalsooni, balse Guddoomiyuhu wuu ka maquurtay inuu ka jawaabo codsigaasi, waxaannu fadhiga ku xidhay codqaadista ku saabsan soo jeedinta X. Cabdi-waraabe.
Sidoo kalena, waxa fadhiga albaabadu u xidhan yihiin ee goluhu u ballamay ka biyo-diiday Xildhibaan Axmed Muuse Obsiiye oo ka mid ahaa laba mudane oo diiday cod u qaadista soo jeedinta X. Cabdi-waraabe, kaas oo markii fadhiga laga soo dareeray dibada ugu waramayey warbaahinta, waxaannu Md. Obsiiye ku andacooday in aannu fadhigaasi waxba soo kordhinayn, maadaama aannu Guddoomiyuhu daacad ka ahayn.
Fadhiga uu sheegayana waxaan ku diidanahay daacad baanu ka ahayn, waxaannu ku heshiinay oo dhan oo ahaa 5 qodob intiiba wuu beeniyey, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in golaha lagala mid dhigo ka Wakiillada, in wax laga beddelo Xeer-hoosaadka, si uu noo wada ilaaliyo illeyn iminka iyaga ayuun buu ilaaliyaaye, waxaannu ku heshiinay in account 15 la xidho oo aanay lacagtayadu ku dhicin, wuu diiday yaan aamini karaa markaa.
Guddoomiyuhu isagaa wax kasta oo xumaan ah wada, waayo afar qodob oo dastuuri ah ayuu jebiyey, awood uu distoorka qodobka 83 ayaa na siiyey ayaanu lahayn, wuu tuuray, berigii hore ee waqtiga naloo kordhiyey wuxuu nagu yidhi difaacda, miyaanu isagu naga mid ahayn, mid kale ayaanu Guurti ku ahayn oo ah qodobka 77 oo odhanaya goluhu waa gole odayaal isna dumar buu soo geliyey, maanta qabyaalad iyo firqado ayaanu u fadhinaa ee uma fadhino gole.”
Xildhibaanka oo la weydiiyey in mooshinkooda weli ay Madaxtooyadu dabada ka wado, si muddada loogu kordhiyo, sida uu Guddoomiyuhuba hore ugu eedeeyey, waxa uu ku jawaabay; “Arrintaasi ma jirto wax caddayn karaana ma jiraan, anigu waxaan leeyahay taa annagu ma lihin, hor dhaca uu ka hordhacayna waa sharaf-darro golaha ku dhacday, waayo Komishanka ayaa inuu soo gudbiyo leh, isagaa waqti qabashada leh inuu yidhaa doorasho maanta ma qaban karo, markaa annaguna aannu ka hadalno oo arrinta eegno ayuu sharcigu noo bannaynayaa.”